किङ मेसिलाई भित्र्याउन न्वारान देखिकै बल लगाउँदै पिएसजी, मागेजति मुल्य दिन तयार::The Leader Of Nepal
किङ मेसिलाई भित्र्याउन न्वारान देखिकै बल लगाउँदै पिएसजी, मागेजति मुल्य दिन तयार
काठमाडौं : फ्रान्सेली क्लब पेरिस सेन्ट जर्मेन (पीएसजी) ले अर्जेन्टिनी फरवार्ड लियोनल मेसीलाई अनुबन्ध गर्न आन्तरिक तयारी थालेको छ। क्लबले अर्का फरवार्ड किलियन एमबाप्पेलाई समेत राख्नेगरी मेसीलाई भित्र्याउने तयारी थालेको हो।
क्याटलान क्लब बार्सिलोनाले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आर्थिक र संरचनागत अवरोधले मेसीसँग नयाँ सम्झौता हुन नसकेको जानकारी दिएको थियो। बार्सिलोनाको यो निर्णयसँगै मेसीका एजेन्ट तथा पिता जोर्गे मेसीले पीएसजीसँग सम्पर्क गरेका थिए। पीएसजीले यसअघि नै जुनमा सम्झौताबाट मुक्त भएपछि मेसीलाई भित्र्याउने तयारी गरेको थियो।
पीएसजीका मुख्य प्रशिक्षक मौरिसियो पोचेटिनोले पत्रकार सम्मेलनमा हाँस्दै भने,‘मेसीलाई भित्र्याउनुको मतलब एमबाप्पेले क्लब छोड्ने हो? हैन!’ पीएसजीसँगै इंग्लिस क्लब म्यानचेस्टर सिटीले पनि मेसीलाई अनुबन्ध गर्न इच्छा जाहेर गरेको छ।
एक सिजन अगाडि नै सिटीले पनि मेसीलाई अनुबन्ध गर्नका लागि बार्सिलोनासमक्ष गाब्रियल जिसस, बेर्नार्डो सिल्भा र एरिक गार्सिया र ८९.५ मिलियन युरो दिने अफर गरेको थियो।
यद्यपि, बार्सिलोनाले मेसीको ‘रिलिज क्लज’ ७ सय मिलिय युरो तोकेको थियो। ७ सय मिलियन युरो तिरेपनि बार्सिलोनाको अनुमति बेगर मेसीले क्लब छाड्न भने पाउने थिएनन्। त्यसैले उनी एक सिजन बार्सिलोनामै बस्न बाध्य भए।
अब सिटीले भित्र्याए प्रशिक्षक पेप ग्वार्डिओला र मेसीको पुनर्मिलन हुनेछ। ग्वार्डिओलाले बार्सिलोनामा मेसीलाई २००८ देखि २०१२ सम्म प्रशिक्षण दिएका थिए। ग्वार्डिओला बार्सिलोनाको प्रशिक्षक रहँदा क्लबले लगातार सफलता हात पर्नुका साथै मेसीले आफूलाई विश्वस्तरीय खेलाडीको रुपमा स्थापित गरेका थिए।
त्यसबेला मेसीले आफ्नो खेलमा व्यापक सुधार गर्दै टोलीका साथै व्यक्तिगत सफलता हासिल गरेका थिए। ग्वार्डिओला र मेसी इतिहाद सर्ने विषयमा यसअघि नै छलफलमा थिए।
टोकियो पाराओलिम्पिक्समा दुवै हात नभएका पौडी खेलाडीले जिते कीर्तिमानी चार स्वर्ण
फ्यान चकित ! किङ मेसिले १० नम्बर जर्शी छोडेर ३० नम्बर रोज्नुको कारण यस्तो
ओलम्पिकमा नयाँ कीर्तिमान : एकैदिन दाजुबहिनीले जिते स्वर्णपदक
“मेस्सी म भन्दा राम्रा खेलाडी होलान् तर म मेस्सी भन्दा ह्यान्डसम छु”- क्रिस्टियानो रोनाल्डो
पत्याउनु हुन्छ ? कुनैबेला अरुको घरमा भाडा माझ्ने यी खेलाडी ओलम्पिकमा स्वर्ण पदक जितेपछि रातारात अरबपति भईन